Jamal Khashoggi: Shan qof oo dil loogu xukumay dilkiisa - BBC News Somali
Jamal Khashoggi: Shan qof oo dil loogu xukumay dilkiisa
Maxkamad ayaa dil ku xukuntay shan qof oo lagu helay in ay ku lug lahaayeen dilkii Jamal Khashoggi, sida ay sheegtay waaxda dacwad oogidda Sacuudiga.
Khashoggi, wuxuu ahaa weriye aad u dhaliila dowladda Sacuudiga, waxaana lagu dhex dilay gudaha qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul. Dilkaas waxaa ka dambeeyay koox ka tirsan sirdoonta Sacuudiga.
Waaxda dacwad oogidda Sacuudiga waxay sheegtay in dilkaas ay geysteen "koox keligeed howlgaleysay amar la'aan" waxayna dacwad ku oogtay 11 qof oo aan la magacaabin.
Khubaro ka tirsan Qaramada midoobeey oo baaritaan sameysay waxay sheegeen in uu "ahaa dil aan sharci ahayn".
Agnes Callamard oo ka tirsanayd khubaradaas waxay sheegtay in dhaxal-sugaha boqortooyada, Maxamed Bin Salmaan ay tahay in la baaro lugtii uu ku lahaa wax ay ku tilmaamtay dil sharci daro ah.
Wuxuu beeniyay in wax lug ah uu ku lahaa arrintaas, balse bishii October wuxuu sheegay in uu qaadayo masuuliyad buuxda, isagoo ah hoggaamiye Sacuudiga u dhashay.
Sooyaalka xirfadeed ee Jamaal Khaashoqji wuxu ka soo bilaabmay sannadihii ugu horeeyey xirfadiisa ee uu bilaabay weriyenimada, waayadaas oo ay saaxiibeen Usaama Bin Laadin, ilaa uu haatan noqday qof mucaarad ku ah Sucuudiga oo uu dalkana ka tagay.
Intaan la waayin raq iyo ruux ba maalintii uu galay Qunsuliyadda Sucuudiga ee Istanbul, Khaashoqji oo dalkiisa iskii uga tagay wuxu u dhexeeyey oo kolba mid joogayey dalalka Maraykanka, Ingiriiska iyo Turkiga.
"ciqaabidda dadka la tuhmay"
Dhaxal sugaha Sacuudiga ayaa horey ballan qaaday in la ciqaabi doono "Dambiileyaashii" masuulka ka ahaa dilkii wariye Jamal Khashoggi ee Turkiga lagu dilay.
Asagoo ka hadlayey madasha ganacsiga ee ka dhacday Riyadh, Mohammed bin Salman ayaa yiri "Fal dambiyeedkaas waxa uu xanuun ku ahaa dhammaan dadka reer Sacuudi" mana noqo doono mid aan ku kala tagno Turkiga.
Masuuliyiinta Sacuudiga ayaa horay u beeniyey eedaymaha sheegaya in Dhaxal Sugaha laftiisu uu kaalin ku lahaa dilka.
Khashoggi ayaa 2-dii October booqasho ku tagay qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul.
Dawladda Sacuudiga ayaa dilka ku eedaysay koox dilaa ah oo arxan daran.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegaya in saxafigaas lagu dilay qorshe si feejigan ay u soo abaabuleen saraakiisha sirdoonka Sacuudiga iyo saraakiil kale wuxuuna ku tilmaamay "dil siyaasadeed."
Muxuu yiri Dhaxal Suguhu?
Waxay ahayd markii ugu horraysay ee uu si rasmi ah uga hadlo arrintan tan iyo markii Sacuudigu uu qirtay in Khashoggi lagu dhex dilay qunsuliyadda.
Waxa uu sheegay in dilku uu ahaa "Dambi bahalnimo ah oo aan marmarsiiyo loo raadin Karin" wuxuuna ballan qaaday in "Kuwii ka dambeeyey fal dambiyeedkaas lala xisaabtami doono … ugu dambayntana caddaalada la hor keeni doono"
Dhaxal Sugaha Sacuudiga ayaa la kulmay wiilka Khashogg, ee Salah.
Waxa uu sheegay in Turkiga ay wadashaqayn wanaagsan lahaayeen, asagoo intaas ku daray: "Dad badan ayaa iskudayaya in ay ka faaidaystaan xaaladdan xanuunka badan si ay ukala geeyaan Sacuudiga iyo Turkiga. Waxaan doonayaa inaan farriin u diro: Waligiin ma awoodi doontaan in aad sidaas yeeshaan.
Shirkan oo saddex maalmood soconaya oo loo bixiyey " Hindisaha maalgashiga mustaqbalka" laguna magacaabo ""Davos in the desert", ayaa muhuum u ah Sacuudiyiinta balse waxaa mar horeba qaaddacay qaar badan oo kamid ah hoggaamiyeyaasha ganacsiga iyo siyaasadda ee reer Galbeedka wixii ka dambeeyey arrintii Khashoggi.
Xog xasaasi ah oo soo baxday sannad ka dib dilkii Jamal Khashoggi
Maxamed Bin Salmaan: Waan ciqaabi doonnaa dambiileyaashii dilay Jamal Khashuqji
Dhaxal sugaha Sacuudiga oo cadaadis xooggan lagu hayo
Sacuudiyiinta ayaa isku dayey in madasha shirka ay u ekaysiiyaan mid sidii lagu waday u dhacday, inkastoo wasiirka Tamarta Sacuudiga Khalid al-Falih uu qiray Talaadadii in ay jirto xiisad ka dhalatay arrintii Khashoggi oo ay shirka saamayn ku yeelatay.
Dhaxal Sugaha ayaa Talaadadii soo muuqday balse wax badan ma aanu oran.
Waxa uu ka qayb galay booqasho uu aabbihiis, Boqor Salmaan ugu tagay xubno kamid ah qoyskii Khashoggi.
Mohammed bin Salman horay ma uga hadlay arrintan?
Waxa uu waraysi siiyey Bloomberg,waxaana la daabacay 5-tii October, saddex cisho kadib booqashadii qunsuliyadda.
Waraysigaas ayuu ku sheegay "Inuu maqlay uun warar suqeed ku saabsan waxa dhacay"
Waxa uu intaas ku daray: "Sidaan maqlay wuxuu galay qunsulliyadda wuuna ka baxay dhowr sadiiqo kadib ama hal saacad. Mana hubo."
Dhaxal sugaha Sacuudiga ayaa sheegay in ay xukuumadda Turkiga u oggolaanayaan in ay baadhitaan ku samayso dhismaha "Majirto wax aan qarinayno" ayu yiri.
Maxaa ugu dambeeyey baadhitaankii?
Arrinta ugu wayni waa maydkii, kaas oo aan wali la hayn wax astaan ah.
Halka ugu dambaysay ee diiradda la saaro ayaa u muuqata in uu yahay ceel kuyaal beer ku dhextaal dhismaha qunsuliyadda Sacuudiga.
Intii uu baadhitaanku socday waxaa jira warar is khilaafsan oo soo baxay. Wakaaladda wararka Turkiga ee Anadolu ayaa markii hore sheegtya in Sacuudiyiintu ay diideen in ay fasax u siiyaan in la baaro, isla TV-ga qaranka Turkiga ayaa haddana sheegay in fasax la siiyey.
Talaadadii waxaa soo baxay warar isla kuwaas lamid ah oo is khilaafsan oo ku saabsan in alaabo uu lahaa Khashoggi laga helay boorso ku dhex jirtay gaari diblumaasi oo Sacuudiga laga leeyahy.
Mr Erdogan ayaa sheegay in Turkigu uu hayo caddaymo xooggan oo ku aaddan in saxafigaas lagu dilay shirqool bareer ah wuxuuna ku baaqay in dadka dilkaas lagu tuhunsan yahay lagu maxkamadeeyo magaalada Istanbul.
Faahfaahintii Sacuudiga ee dilkii Jamal Khashoggi oo la qaadan la'yahay
21 Oktoobar 2018
24 Oktoobar 2018
Jamal Khashoggi waayuhuu soo maray waxa ka mid ahaa waraysiyo uu la yeeshay Usama Bin Laadin
Xogta Saacadda Apple Watch uu Jamal Khashoggi xirnaa laga helay dilkiisa caddeyn ma u noqon kartaa?
16 Oktoobar 2018
16 Maajo 2021
Muxuu yahay horyaalka Kubbadda Kolayga ee Afrika ee hadda billowday?